I-Plex.Earth, umzekelo omhle wokungena kwimakethe yaseSpeyin - i-Geofumadas
I-Plex.Earth, umzekelo omhle wokungena kwimakethe yaseSpeyin
NgoJanuwari, 2012 Google umhlaba / imephu, ezintsha
Ngoku nje namhlanje uye wakhululwa inguqulelo yesiSpanish yephepha lePlexScape, ngaphandle kweprogram yayo yasekuqaleni yesiGrike nayo yayikho ngesiNgesi nangesiFrentshi.
Kubonakala ngathi uphawu oluphawulekayo, esilubonayo izibonakaliso ukususela ngaphambili, ukususela kwiPlex.Ixesha elide ngaphakathi kweelwimi ze-10 sele sele zibandakanya iSpanishi kwinguqulo ye-2.0.
Ewe, akukho nto ithetha ngayo ulwimi lwesibili elisetyenziswa kakhulu kwiGoogle. Kodwa oku kubangelwa umkhwa ophawulekayo kule candelo, elimele abantu abangaphantsi kwe-500 zabantu, nangona besasazwa kulo lonke ihlabathi, bagxininiswe kwiMerika kunye ne-Peninsula yase-Iberia. Icandelo elo lonke likhula njengemarike, apho iinkampani ezincinci kunye neengcali ziye zaqonda ukubaluleka kokusebenzisa isofthiwe ngokusemthethweni kunye noorhulumente ukuba bamkele imigaqo-nkqubo yokwenza utyalo-mali kwicandelo lobuchwepheshe.
Kwakhona kubaluleke kakhulu into ephawulekayo, basebenzise inguqu yabantu, eyenza umxholo ucacile, ngokuchasene noko iinguqulelo zeGoogle zivelisa umzamo walo owona mgca wokuqonda iilwimi zethu.
I-Geofumadas ilandelelise i-Plex.Ixesha eliyiminyaka emibini ngoku, malunga nokudalwa kwayo. Ngoku ndiyakucinga ngomdali wakhe (i-Engine Engineer), kubuza imibuzo emithathu ngokuqinisekileyo abaninzi banqumla isiqingatha sentloko:
Ngaba kunokwenzeka ukuba ube neGoogle Earth kwi-AutoCAD, ukuxhamla imifanekiso ye-satellite kunye neenkonzo ze-WMS ezikhonjwe apho?
Kwaye ngaba kunokwenzeka ukuba udwebe kwiGoogle Earth, ukuba uchanekile ukuba i-AutoCAD inikezele, kwaye ugcine idatha kwi-dwg?
Ngaba oku kusebenza nawuphi na uhlobo lwe-AutoCAD?
Siyazi ukuba esi sifundo sinomdla kuzo zonke iindawo zehlabathi, kodwa imeko yethu yaseLatin America iyinxalenye enomdla ngakumbi ekusebenziseni iGoogle Earth. Ukuba uhlala eNetherlands, kwaye ufuna umfanekiso wedijithali, udibanisa kuphela kwiinkonzo ze-wms ezinikezelayo mahhala, ukuba ufuna i-orthophoto uhamba kuphela neCadastral Institute kwaye uyifumane kwixabiso elifanelekileyo okanye ngaphandle kwesivumelwano phantsi kwesivumelwano. Ukutshintshwa kweMaphu yaseBal Scale
Kodwa ukuba uhlala eLatin America ... (kunye nemibalwa embalwa), i-orthophoto ethathwe yiCadastre kaZwelonke ngemali kawonkewonke ayifumanekanga, ukuba awuhlali umqulu osayinwe nguMongameli, kukuba ayenayo okanye kufuneka uyihlawule umqeshwa ukuba athengise kuwe phantsi. Kwamanye amaxesha, bayayithengisa, kodwa ixabiso liphela ekupheleni kwoluhlu ... awunakufikelela xa ubona intengo abayifunayo kwimephu ye-cadastral kwifomathi eprintiweyo.
Ngoko iGoogle Earth, kunye nokulinganiselwa kwayo, iba yinto ekhangayo. Ngendlela efanelekileyo yokulungiswa kwintsimi, sele iphelile isisombululo kubuthakathaka beziko kunye nobuqhetseba bokusebenzisa ubuncwane obungabikho.
Ubuncinane kulezi zibuyekezo esiye sathetha ngazo:
Yintoni eya kuba yiPlex.Earth 2.5
Xhuma i-AutoCAD ngeGoogle Earth
Ukuvelisa i-Google Earth Curve nge-AutoCAD
PlexEarth kuzisa 2.0
Ukusebenzisana kwi-UTM neGoogle Earth
Siyakuvuyela ukubona utshintsho oluphakanyisiwe, lubonakaliswe kwinguqu yakutshanje, kwakhona ukubona iSpanishi njengokuba kungenzeka. Xa ndithetha nomnye wabadali balo, ndibhekiselele ukuba phantse i-third of the current customers are Spanish speaking.
Ngethuba lethu, siyakwamkela kwaye sinethemba lokuba lo mkhiqizo uya kuhanjiswa, mhlawumbi unxibelelwano olungcono phakathi kweGoogle Earth kunye ne-AutoCAD.
Post edlulileyo«Edlulileyo Tintin, buyela ebuntwaneni
Post Next Generating sebhithi iziza CivilCADOkulandelayo "